အနုပညာ – Page 187 – We Love Cele
ဇနီးဖြစ်သူကို ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တားမြစ်လိုက်တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးရဲ့ ခင်ပွန်း
ယွန်းဝတီလွင်မိုးကတော့ ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့ ဆယ်လီ မင်းသမီးချောလေးပါ။သရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီး လွင်မိုးရဲ့ သမီးေ ချာလေးပါ။ကလေးဘ၀တည်းက အခုထိ ပရိသတ်ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရထားသူလေးပါ။ ယွန်းဝတီ လွင်မိုးကေ တာ့ သူမရဲ့ ချစ်သူ ထက်ဦးလှိုင်နဲ့ ဇန်နဝါရီလ(၄)ရက်နေ့က မင်္ဂလာပွဲ ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။သားဦးလေးကိုတော့ သြစေ တြးလျနိုင်ငံ Melbourne မြို့မှာ သြဂုတ်လ (၇)ရက်နေ့က မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ..ယွန်းဝတီလွင်မိုးကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ အတူ...
ဆန်းကြယ်အဖြစ် ပုံဖော်ဖန်တီးထားတဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို ထုတ်ပြလာတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကတော့ သူမအတွက်စိန်ခေါ်မှု အသစ်တစ်ခုလို့ဆိုရမယ့် ယောက်ကလျာ Character ကို ရန်သူရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမအတွက်လည်း စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်ကားကြီးထဲမှာ သရုပ်ဆောင်သစ် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နေခြည်ဦးလည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ဦးအတွက်လည်း ပထမဆုံးရုံတင်မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့အလျှောက် ကျရာဇာတ်ရုပ်မှာ အားပြိုင်သရုပ်ဆောင်ကြရမယ့် ကာရိုက်တာတွေကိုယ်စီရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးခြားဆုံးကတော့ ဆန်းကြယ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ သာမန်မိန်းကလေးတစ်ဦးအသွင်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘဲ အပြင်လောကက ယောက်ကျားလေး စစ်စစ်တစ်ဦးပုံစံပုံဖော်ဖန်တီးရခြင်းဖြစ်တာကြောင့်...
ထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့ ဆုရလာတဲ့ သားလေးသိဒ္ဒိစစ်အတွက် ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ မယ်လိုဒီ
သရုပ်ဆောင်မယ်လိုဒီကတော့ သားသားလေး သိဒ္ဒိစစ်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကကနေ အနားယူသွားတာမဟုတ်ပေမယ့်လည်း အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်တာ သိပ်မတွေ့ရတော့ပဲ သားသားလေးရဲ့မိခင်ကောင်း၊ ခင်ပွန်းသည်အတွက် ဇနီးကောင်းဖြစ်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သားလေး သိဒ္ဒိစစ်ကတော့ မေမေမယ်လိုဒီရဲ့ ချောမောလှပမှုတွေကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူလေးပါ။ ကျောင်းတက်နေပြီဖြစ်တဲ့ သားလေး သိဒ္ဒိစစ်ကတော့ ကျောင်းမှာ ဆုရလာလို့ မေမေမယ်လိုဒီတစ်ယောက် အင်မတန် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ ဘာမှသာမထူးချွန်ခဲ့ပေမယ့် မိသားစုလေးအတွက်တော့...
​ထောင်​ထဲ​ရောက်​​နေတာ​ကြောင့်​ မိခင်​ဖြစ်​သူရဲ့ အသုဘကို​ရောက်​မလာနိုင်​တဲ့ ဘုန်းလျှံ
တစ်​ချိန်​က နှုတ်​ခမ်းနီမ​လေး​တွေရဲ့ အသည်းစွဲ ခန္ဓာကိုယ်​​တောင့်​​တောင့်​တင်းတင်းနဲ့ ​ယော​ကျာ်းပီသသူ သရုပ်​​ဆောင်​ဘုန်းလျှံကို မှတ်​မိကြဦးမှာ​ပေါ့။ ဘုန်းလျှံဟာ မြန်​မာရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကား​တွေမှာ အရံသရုပ်​​ဆောင်​အ​နေနဲ့ ​တော်​​တော်​များများ သရုပ်​​ဆောင်​ခဲ့ပြီး သီချင်း MV ​တော်​​တော်​များများမှာလဲ ပါဝင်​ခဲ့သူတစ်​ဦးပါ။ ပရိသတ်​ကြီးချစ်​တဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​ဘုန်းလျှံဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်​မှာ မူးယစ်​​ဆေးဝါးများနှင့်​အတူ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး ​ထောင်​ဒဏ်​ကျ​နေသူတစ်​ဦးပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ လက်​ရှိမှာ သရုပ်​​ဆောင်​ဘုန်းလျှံဟာ သာယာဝတီအကျဉ်း​ထောင်​မှာ ​ထောင်​ဒဏ်​ခံစား​နေရတာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ သရုပ်​​ဆောင်​ ဘုန်းလျှံရဲ့ မိခင်​ဖြစ်​သူ...
အကယ်ဒမီကို တခြားသူတွေကို ရစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ
ယခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲကြီးမှာ ယခင်နှစ်များထက် ပိုမိုရွေးချယ်ရခက်မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစွာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး အဲဒီထဲမှာမှ မြင်တွေ့နေကျ ပုံစံများနဲ့ ကွဲထွက်ကာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီရဲ့ ရုပ်ရှင် ၂ ကားလည်း အကယ်ဒမီဆန်ခါတင် စာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီကတော့ သူ ဖန်တီးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်နေပေမယ့် အခြားသူများ အတွက်သာ ရင်ခုန်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။...
သူမရှိတော့တာကို မေ့သွားလောက်အောင်ထိ ဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ ကွယ်လွန်သူ အောင်ရဲထွေးကို ချီးကျူးလိုက်တဲ့ မိုးမိုး
ကိုယ်စောင့်နတ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က Press Show ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးမှာတော့ သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ထွန်းထွန်း ၊ လွှမ်းပိုင်နဲ့ ဟာသဗီဒီယိုတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကြားနာမည်ကြီးလာတဲ့ အောင်ရဲထွေးတို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ အောင်ရဲထွေးပထမဆုံးသရုပ်ဆောင်ပြီး သူကိုယ်တိုင် မကြည့်လိုက်ရတဲ့ ဇာတ်ကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အောင်ရဲထွေးဟာ 2017 ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ နယူးရီးယားညမှာ အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်မှုကြောင့်...
စားသုံးသူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးခဲ့တဲ့ ဗေလုဝရဲ့ ကျေးလက်မြန်မာထမင်းဆိုင်
ဟာသသရုပ်ဆောင်ကြီး ဗေလုဝဟာ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ လျှမ်းလျှမ်းတောက် နာမည်ကြီးခဲ့သူတစ်ဦးပါပဲ။ ဟာသဆိုလဲ ဟာသအလျာက်၊ ဒရမ်မာဆိုလဲ ဒရမ်မာအလျောက် ကျရာ အခန်းကဏ္ဍတိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ကြီးတစ်ဦးပါပဲ။ ဗေလုဝရဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းမွန်မှုကြောင့်လဲ အင်မတန်မှ တန်ဖိုးကြီးလွန်းတဲ့ အကယ်ဒမီဆုကြီးကိုလဲ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးရရှိပြီးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗေလုဝဟာ သရုပ်ဆောင်အလုပ်သာမက ဝတ္ထုတွေကိုလဲ ရေးသားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဗေလုဝဟာ အနုပညာအလုပ်တွေကို လျော့လုပ်ကိုင်နေပြီး သူ့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်ကို...
လတ်တလောမှာတော့ ချစ်စရာကောင်မလေး ဖြူဖြူထွေးရဲ့ပုံရိပ်တစ်ချို့က ကမ္ဘာကျော် အနုပညာရှင် Selena Gomez နဲ့တူတယ်လို့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးကတော့ TiTi သုံးဘီးကား အတွက် ကြော်ငြာရိုက်ကူးပေးနေတာဖြစ်ပြီး အဝါရောင်လေးနဲ့ လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေက Selena နဲ့တူတယ်လို့ လူပြောများနေခဲ့တာပါ။ ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Selena Gomez ကတော့ သူမရဲ့ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ အနုပညာနဲ့...
ဟာသသရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ်အတွက် တစ်သက်တာလုံးလှူဒါန်းပေးမယ့် ထာဝရအလှူရှင် ထွက်ပေါ်လာ
ဟာသသရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ထာဝရအလှူရှင် ထပ်မံ ထွက်ပေါ်လို့ လာပြီလို့ ခင်သဇင်က ဝမ်းသာအားရနဲ့ ပြောပြလာပါတယ်. လက်ရှိမှာလည်း ကစ်ကစ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးက အနည်းငယ်ကောင်းမွန်လာပြီလို့ ဆိုပါတယ် သရုပ်ဆောင် ခင်သဇင်က ဟာသသရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ထာဝရ အလှူရှင်တစ်ဦး ပေါ်လာလို့ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်လို့နေပါတယ်. ဒီ အလှူရှင်ရဲ့ လေးစားစရာ ကောင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း အခုလို...
မိုးအောင်ရင် ကျေးဇူးကြောင့် ဒီလိုအခြေနေပြန်ရပ်တည်လာနိုင်တာပါလို့ပြောလာတဲ့ နေမင်း
သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်ဟာ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှုနဲ့ရော၊ လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုနဲ့ပါ ထောင်ဒဏ် (၁၇) တိတိ ချမှတ်ခံခဲ့ရတာကြောင့် ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေက စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပါ။ ထောင်ဒဏ် (၁၇) နှစ်ဆိုတာ မိုးအောင်ရင်လို အောင်မြင်နေဆဲ အနုပညာရှင် လူငယ်တစ်ယောက်အတွက် ဆုံးရှုံးမှုတွေ အများကြီးရှိတာမို့ မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့အတူတူ ပရိသတ်တွေကပါ နှမြောတသဖြစ်နေကြပါတယ်။ မိုးးအောင်ရင်ရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပေါ် အနုပညာမောင်နှမတွေကပါ ဝမ်းနည်းနေကြပြီး မိုးအောင်ရင်အတွက်...
Page 187 of 295 Prev 1 … 186 187 188 … 295 Next